प्रविणको ‘इन्काउण्टर’ कि घेरावन्दीमा मृत्युवरण ? चरी र घैंटेकै निरन्तरता हो ? | News Dabali
August 10, 2017 | 9:54 pm
ललितपुरको कुसुन्दीमा प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको हो वा त्यो घट्ना परिस्थितिजन्य अवस्थामा थियो भन्ने विषय अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । प्रहरीको भनाई मान्ने हो भने उनी आफैले कन्चटमा गोली हानेर मृत्युवरण गरेका हुन । ललितपुर प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध महाशाखाको भनाई हेर्ने हो भने गोलमोटल छन । खत्रीका परिवारले घरभित्रै छिरेर गोली हानेको दावी गरेका छन भने प्रहरीका केही अधिकारीबाट फरक दावी सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले दावी गरेझै मात्रै उनी आफैले गोली प्रहार गरेका होइनन कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै उब्जिएको छ ।
नेपालको अपराधिक दूनियामा तीन वर्ष यता प्रहरी ‘इन्काउण्टर’ले चर्चा बटुलिरहेको छ । तीन वर्ष अघि दिनेश अधिकारी चरी र एक बर्ष अघि कुमार श्रेष्ठ घैटे इन्काउण्टरमा मारिएपछि त्यसको सिको गर्दे पछिल्लो पटक ललितपुरका प्रविण खत्री प्रहरीको घेराबन्दीमा भएको गोली प्रहारसम्म आइपुग्दा विवादरहित बन्न सकेन ।
ललितपुरको कुसुन्दीमा प्रहरीले इन्काउन्टर गरेको हो वा त्यो घट्ना परिस्थितिजन्य अवस्थामा थियो भन्ने विषय अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । प्रहरीको भनाई मान्ने हो भने उनी आफैले कन्चटमा गोली हानेर मृत्युवरण गरेका हुन । ललितपुर प्रहरी परिसर र महानगरीय अपराध महाशाखाको भनाई हेर्ने हो भने गोलमोटल छन । खत्रीका परिवारले घरभित्रै छिरेर गोली हानेको दावी गरेका छन भने प्रहरीका केही अधिकारीबाट फरक दावी सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले दावी गरेझै मात्रै उनी आफैले गोली प्रहार गरेका होइनन कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै उब्जिएको छ । प्रवीनका बाबु प्रहरीले कारवाही थाल्दाका बखत घरमा थिएनन । तर उनले छोरालाई पक्राउ गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रहरीले गोली हानेर मारेको दावी गरे । खैरो हिरोइन जस्तो कडा लागुपदार्थको कारोबार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गर्न जाँदा हतियार निकालेर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि प्रतिरक्षामा प्रहरीले गोली चलाएको महाशाखा प्रमुख (एसएसपी) दिनेश अमात्यको भनाई छ ।
महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अमात्यले प्रहरीले घेरा हालेर पक्राउ गर्ने प्रयास गर्दा उनी आफै घरको छतबाट हाम्फालेर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको बताउछन । ‘फिल्मी शैलीमा दुबै हातमा बन्दुक लिएर घरको छतबाट हामफालेर प्रहरीलाई गोली हान्दै भाग्न खोज्दा प्रहरीले पनि गोली चलाएको हो प्रहरीले चलाएको गोली लाग्यो कि लागेन भन्ने बारेमा थप छानवीन भैरहेको उनको भनाई छ । प्रहरीले फरन्सीक ल्याव टेष्टका लागि सो गोली विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाएको छ । प्रहरीले सो घट्ना लगत्तै मृतकसँग २ वटा पेस्तोल बरामद हुनु, उनी लागुपदार्थको दुव्र्यसनी रहेको परिवारलेनै स्विकार गरेकाले प्रहरीले गरेको दावीलाई सत्य मानिएपनि दुइ तलामाथिको छतबाट हाम्फालेर प्रहरीतिर आक्रमण गरेको कुरालाई भने त्यति सहज मान्न सकिन्न ।
त्यतिबेलाको अवस्था गोली चलाउनु पर्ने हो कि होइन भन्ने बारेमा प्रहरीले केही बताउन चाहिरहेको छैन । घट्नाको प्रत्यक्षीदर्शी नभएकाले त्यसको स्वतन्त्र पुष्टिको समेत अभाव रहेको छ । प्रहरीले खत्रीलाई लागुपदार्थका कारोबारी रहेको दावी गरेको छ । उनको घरमा प्रहरीले छापा समेत मारेको थियो । हतियार फेला परे पनि प्रहरीले उनको घरमा के कति लागु पदार्थ फेला पार्न सकेको छैन । घट्ना हुने विहान ठूलो परिमाणमा लागु औषधको कारोवार हुदैछ भन्ने अनुमान प्रहरीले गरेको छ ।
इन्काउण्टर अप्रेशन नै किन ?
प्रहरीले तराइ मधेश तथा सशस्त्र युद्धको बेला कहिले काही गोली चलाएपनि गुण्डाविरुद्धको अप्रशेन भने तीन वर्ष अघिबाट शुरु भएको हो । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख एसएसपी हालका डिआइजी पुस्कर कार्कीले गुण्डाविरुद्ध इन्काउण्टर गर्नुपर्छ भन्दै त्यसको शुरुवात गरेका हुन । काठमाडौ राजनीतिक संरक्षणमै संगठित आपराधिक गतिविधीमा लागेकाहरुलाई सफया गर्ने उदेश्यले चरी इन्काउन्टरको शुरु गरिएको प्रहरीले दावी गरेको छ । दोस्रो इन्काउन्टर अर्का गुण्डा नाइके कुमार घैंटेको भयो सामाखुसीमा । आफनै घर अगाडिको खुल्ला चौरमा महाशाखाको कारवाहीमा उनी मारिएका थिए । प्रहरीको दावी चरीकै झै उस्तै थियो प्रहरीमाथि आक्रमण गरेकाले सुरक्षाका लागि प्रहरीले गोली चलाउँदा उनी मारिएका थिए । घैंटे इन्काउन्टरमा प्रत्यक्षदर्शी पनि थिए । घटनाका अन्य २ घाइते पनि भए । प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरण,घटनास्थलको प्रकृती र प्रत्यक्षदर्शीको भनाईले घैंटे इन्काउन्टर पनि प्रहरीको दावी कमजोर बनेको थियो । यी दुबै घटना विवादमा आएका ।
राज्यकै मौन स्वीकृतिको आधारमा यी दुवै इन्काउटर भएको भएपनि प्रवीनको विषमा भने प्रहरीले ठूलै कमजोरी रहेको देखिन्छ । प्रवीनको पृष्ठभुमी र अवस्था हेर्दा उनी चल्तीका लागुऔषध तस्कर होइनन उनी दूव्र्यसनीमात्रै भएको स्पष्ट छ । उनीमाथि गोली नै प्रहार गरेर मारिहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको विभिन्न तथ्यहरुले देखाउछन, तर प्रहरी यसतर्फ बोल्न चाहदैन । मुम्बईका इन्काउन्टरका प्रारम्भ नेताको संरक्षणमा कानुनको छिद्रा प्रयोग गरेर सुरक्षित रहेकाहरुलाई कानुनको त्यही कमजोरीमा खेलेर सफाया गर्ने रणनीतीमा शुरु भएको थियो । भारतको विहार, मुम्बई, तलिमनाडुलगायत राज्यमा ‘इन्काउण्टर स्पेसलिस्ट’ प्रहरी अधिकृत छन् । ती राज्यमा इन्काउण्टर सेलसमेत छन् । राज्यले गैर कानुनी नीति अपनाएको फाइदा लिदै एउटा आपराधिक समूहको स्वार्थमा अर्को समूहको सफाया गरेको राजनीतिक स्वार्थमा प्रेरित भएर निर्दोषलाई अपराधी बनाएर हत्या गर्नेक्रम बढेका थिए । यहा प्रवीन खत्रीको घट्नाले यसलाई बल दिन्छ कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ ।
अपराधी मारिएको त हो नी भनेर नेपालका हरेक इन्काउन्टरमाथि मौन धारण गर्ने हो भने मुम्बईको रोग यता आउन समय लाग्दैन । सोमबार विहान ७ बजेदेखिनै महाशाखाका प्रहरीहरु कुसन्तीस्थित प्रवीनको निगरानीका लागि पुगेका थिए तर दिउँसो झण्डै २ बजेतिर प्रहरी घेराबन्दीमा परेर ललितपुरको कुसुन्ती घर भएका प्रविण खत्रीको ज्यान गएको गयो । ३२ वर्षे खत्रीलाई गोली लागेर गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा ललितपुरस्थित पाटन अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको भनिएपनि उनको लाशको तस्वीर हेर्दा तत्काल उठाइएको जस्तो थिएन । पाटन अस्पतालका डाक्टरले खत्रीलाई मृत घोषित गरेका थिए ।
यस्तो थियो घट्नाको प्रकृति
प्रहरीका अनुसार घट्नाको अघिल्लो दिन साझ सात बजेतिर प्रवीन खत्रीले स्थानीयहरुलाई पेस्तोल देखाएर तर्साएको भन्दै महाशाखामा सुराकी गरेका थिए । र त्यही क्रममा लागुऔषधको तस्करी पनि हुदैछ भन्ने सुचना पुगेको थियो । ‘केही दिनअघि अपराध महशाखामा सूचना आएको प्रविण खत्री लागु औषधका कारोबारी हुन् उनीसँग पेस्तोल पनि छ छरछिमेकलाई दुःख दिने गरेका छन् सूचना पाएपछि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले गोप्य रुपमा उनीमाथि निगरानी बढाएको थियो’, महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्यले भने । त्यतिबेला प्रवीन घरमै रहेको र उनको साथमा दुई वटा पेस्तोल समेत भएको पत्ता लागेपछि सवा दुई बजे अपराध महाशाखाको टोली हातहतियारसहित पुगेको थियो ।
सिसिटिभी जडान रहेको सबै कोठमा प्रवीनले प्रहरी आएको थाहपाएपछि प्रहरीले ढोका खोल्न केही बरे आग्रह गर्दा ढोका खोलेनन् । ढोका खोल्नुका सट्टा उनी पछाडिबाट हाम फालेर प्रहरीतर्फ फायर गर्दै भागेको अपराध महाशाखाका एसएसपी दिनेश अमात्यले बताए । प्रहरीका अनुसार प्रवीन साढे दुई तल घरको कौशीबाट हाम फालेर पद्म कोलोनीतर्फको खुल्ला चौरमा पुगेका थिए । उनी खुला चौरमा पुगेपछि फायर गरेका थिए । जवाफमा प्रहरीले पनि फायर गरेको थियो । लागुऔषध कारोवारीले आफै सुसाइट गर्ने भएकाले गोली आफैले आफ्नै कन्चटमा हानेको प्रहरीको दावी छ यद्यपी नेपालमा यस्तो अवस्था भने नआएको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउछन । ‘ लागु औषधका ठूला कारोवारी छैनन आफैले सुसाइट गर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा छैन’, एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।
दुईवटा हतियार रहेको जानकारी पाएपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने विधि अपनाउनुको साटो घेराबन्दी गरी गोली फायर गरेको प्रवीनका आफन्तहरुको दावी छ । तर महाशाखाले उनको हतियार लिने र कानून बमोजिम कारबाही गर्ने उद्देश्यसहित प्रहरी टोलीको उनको घर पुगेको बताउदै आएको छ । उनलाई केही समय अघि लागुअषौध नियन्त्रण व्यूरोको टोली दुवर््यसनी भएको भन्दै पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका उनलाई पुनस्थपाना केन्द्रमा उपचार गराउन भन्दै छाडेको थियो । अपराध महाशाखाले भने उनी आजभन्दा झण्डै १० वर्ष पहिले लागु औषधको कारोबारीमा पक्राउ परेको दावी गरेको छ । मृतकका केही आफन्तले यसको सत्य तथ्य छानबिन हुन पर्ने माग गरेका छन् । मृतकका बुवाले यसमा प्रहरी दोषी भएको आरोप लगाएका छन ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) अवदेश विष्टका भान्जा हुन उनी । विष्टको ठूलो बुबाका नाती प्रवीण खत्री मावलीघरमा कमै जान्थे । लागुऔषध दूव्र्यसनी हुन भन्ने बारे परिवारका सबै सदस्यलाई जानकारी छ । उनी तीन पटकसम्म सुधार गृह नार्कोनन्मा बसेको लागु औषध नियन्त्रण व्यूरोका प्रमुख डिआइजी धिरु बस्न्यातले बताउछन । सम्पन्न परिवारका व्यक्ति प्रविणले सुधार गृहमा बस्दा लागु औषध खान नपाएपछि सुधार गृहको धाराका टुटी खाएका थिए । धाराका टुटी खाएपछि उनको पेटको अपरेशन गरिएको थियो । ललितपुरकै ढोलाहिटीमा जन्मेका उनलाई परिवारले सुधार्ने प्रयास गरेका थिए ।